အပြာရောင် Yeti ရှာဖွေတွေ့ရှိ | Martech Zone
အပြာရောင် Yeti ရှာဖွေတွေ့ရှိ
အဆိုပါ Martech Zone ရေဒီယို ပွဲတော်သည် (၁,၅၀၀ ကျော်) ပရိသတ်များကိုမောင်းနှင်နေပြီးအပတ်တိုင်းလူကြိုက်များလာသည်။ လူကြိုက်များမှုနှင့်အတူလည်းဝေဖန်မှုများလာ ... နှင့် Dave Woodsonအတွေ့အကြုံရှိ podcaster သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ podcast အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ (ကောင်းစွာခံထိုက်သော) ခက်ခဲသောအချိန်ကိုပေးခဲ့သည်။ ငါတို့က Snowflake အပြာရောင် USB microphone ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးထဲမှာ - အားလုံးမှာ acoustics မှ complimentter မဟုတ်ပါဘူး။
ရလဒ်ကတော့မိုက်ကရိုဖုန်းကစားပွဲပေါ်ရှိမည်သည့်ကိုမျှမထိခိုက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲသေတ္တာ၏ညည်းသံနှင့်သံဖြူ - အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုရရှိခဲ့သည်။ စုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများပါသောဆိတ်ငြိမ်သောအခန်းတစ်ခန်းတွင်ထိုမိုက်ကရိုဖုန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အထူးသဖြင့်သူကခရီးဆောင်နိုင်ပြီးမင်းရဲ့အိတ်ထဲကိုလျှောကျသွားနိုင်တယ်။ တစ်နှစ်ခရီးသွားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာပြီးကော်ကပ်ဖို့အတွက်ကော်လိုတယ်။ မိုက်ခရိုဖုန်းအသစ်အတွက်အချိန်။
Dave က Blue ကိုအကြံပြုသည် Yeti USB မိုက်ခရိုဖုန်း ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစျေးနှုန်းချိုသာပြီးကတည်းကချက်ချင်းမှာယူခဲ့တယ်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ အထက်ပဲ။ နောက်ဆုံးပေါ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမဆွေးနွေးမီရောက်ရှိလာခဲ့သည် Facebook ရဲ့အီးမေးလ်အင်္ဂါရပ်အသစ် အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များနှင့်အတူ။
wow အတော်လေးနဂါး! မိုက်ခရိုဖုန်းစိတ်ကူးကောင်းကောင်းရပြီးပြပွဲရဲ့အရည်အသွေးကအတော်လေးတိုးတက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြသနေသောသတ္တုခုံများနှင့်ပဲ့တင်သံအခန်းများတွင်စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထောက်ခံချက်များအတွက် Dave မှအများကြီး။
မိုက်ခရိုဖုန်းမှာပရိသတ်အပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ၄ ချက်ရှိတယ်။ ၎င်းတွင်သင်ရွေးချယ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အသံတည်နေရာပေါ် မူတည်၍ စတူဒီယို၊ နှလုံးခုန်၊ omnidirection၊ ဒီမှာရှင်းပြချက်ပါ Yeti ဆက်တင်များ Blue's site မှ application များ
အသံတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်ရုံးမှာဆက်လုပ်သွားမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် podcasting microphone ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုတာသံသယမရှိပါဘူး။ ဤသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်စျေးနှုန်းမှာဟာ့ဒ်ဝဲအလွန်ကြီးစွာသောအပိုင်းအစပါ!
Tags: စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Podcastမိုက်ခရိုဖုန်း